USB Stick ဘာဖြစ်မှန်းမသိလို့ - MYSTERY ZILLION
USB Stick ဘာဖြစ်မှန်းမသိလို့
USB stick နဲ့ data ကူးတဲ့ အခါ အရမ်းကြာပါတယ် .. size သိပ် မကြီးတာတောင် တော်တော် ကြာပါတယ် .. kingston 1G ပါ ..
အဲဒါ ပြင်လို့ ရနိုင်သေးလား .. ဒါမှ မဟုတ် အမိုှက်ပုံးထဲ ဘဲ ထည့်လိုက်ရတော့ မလား ...
တကယ်လို့မရသေးရင် firmware update လုပ်ကြည့်ပါ hardware က ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့
နှေးနေတုံးပဲဆိုရတော့ flash memory မကောင်းတော့တောဖြစ်ဖို့များသွားပါပြီ.
ကိုယ့်စက်က လေးနေရင်လဲ ဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်...
အမှိုက်ပုံးထဲ တော့မထည့်လိုက်ပါနဲ့ kingston အစစ်ဆိုရင်....:D
DataTraveler နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး....Format မချပါနဲ့..
ကိုယ့်စက်က မသိတော့ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့......
Copy & Paste မြန်မြန် ကူးချင်ရင် FastCopy နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်.......
ကျွန်တော်လဲသေချာတော့မသိဘူးပြောကြည့်မယ်ဗျ။ stick က data အထုတ်အသွင်းကြာတယ်ဆိုတာ kna ရဲ့စက်တစ်လုံးတည်းမှာဖြစ်တာလား? စက်တိုင်းမှာဖြစ်တာလား? kna ရဲ့စက်တစ်လုံးတည်းမှာဖြစ်တာဆိုရင် စက်မှာပါတဲ့ usb port တွေကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ usb2.0 ကို support မပေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါမယ် (သေချာမသိ)။ စက်တိုင်းမှာ data အထုတ်အထည့်ကြာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လဲမသိဘူးဗျ။ အမှိုက်ပုံးထဲထည့်မယ်ဆိုရင် ပုဇွန်တောင်အမှိုက်ပုံမှာ မနက် ၆နာရီလောက်လာပစ်ဗျ ကျွန်တော်လာကောက်မလို့ :P မှတ်ချက်။ ။ အမှိုက်ကောက်သမားမဟုတ် :D:D
ဖြစ်တတ်ပါတယ် ...... Full Format ချကြည့်လိုက်ပါ ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါတယ် .......
ဟုတ် .. ၀ိုင်းပြီး ပေးကြတဲ့ အကြံဉာဏ် တွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ ...
Format ချကြည့်လိုက်ပါ့မယ် ..
ပြီးတော့ စက်တိုင်းမှာ နှေးနေတာပါ ကိုညမီးအိမ်ရေ ... ပစ်မယ်ဆိုရင် ကောက်မဲ့သူက ရှိပြန်တော့ ပစ်ရမှာတော့ နှမြောသား ... :P:P
ဒီတော့ အလှဘဲ ချိတ်ထားလိုက်တော့မယ်နော် .. ပုဇွန်တောင်ထိလာရမှာလဲ ေ၀းနေလို့ ..:D:D
A ma Kna,
It is because the computers you use only have USB 1.1 port or maybe your stick is defeated. Test at the computer that has USB 2.0 port. If this slowness continues then it is your stick that make such slow.
But when you decided to throw it, don't go to ပုဇွန်တောင်. Instead I will come and take it.:D
I agree with u "Istein" .I think that but I don't know how to repair it . :P I'm waiting the one who can answer that qusetion.:39:
Write protect virus ၀င်တဲ့ USB အတွက်ပါ